wax ka beddelka xadhigga birta ah Soo saarayaasha & alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha waxay habeeyaan xadhigga birta warshadda
304 Xidhiidhka Degdegga ah ee Badbaadada Tooska ah ee Birta Aan-la-aanta lahayn
Dhexroor 0.6-11mm xadhig xadhig silig dhismaha 1 * 7,7X7,7 * 19,1 * 19, iwm Material galvanized, ahama MOQ 100pcs Material of daahan PVC, PU, ​​nylon, PE. daahan ayaa si weyn u kordhin kara nolosha kiniisadda inta badan codsiga Dahaarka Midabka Cas / Jaalle / Purple / Orange / Fluorescent Pink / Black, iwm. laakiin daahan Transparent waa dhererka ugu caansan sida looga baahan yahay Dhammaadka qaybaha ku habboon oo ay ku jiraan boolal indhaha, links, ilaha, jillaabyada, sl
Nooca badeecada 1. Xariiqda xakamaynta: baaskiilka, mooto, mootada, baabuur, mooto, baabuur koronto, gaadhiga ilmaha iyo khadka kale ee biriiga, khadka gudbinta; Fiilada qalabka isboortiga, xargaha laastikada, qalabka cad, qalabka nadiifinta, qaadista ilmaha iyo khadadka kale ee kantaroolka, iyo sidoo kale laynka joojinta iftiinka iyo alaabta kale ee fiilooyinka; 2. Xadhig caag ah: xadhig isboorti oo ka boodbood ah, xadhig xirfad leh, shabaq tennis, shabaq kubbadda laliska; Xarig caag ah oo daboolan; Xadhigga ilaalinta dhagaxa fuulka, xadhigga gaadhiga, ste...
Xadhig silig galvanized ah oo leh Terminal Isha oo Swaged ah
Xarig jiid, iyo sidoo kale qufullada, qabsatooyinka gourd, xargaha iyo qalabyada kale ee xadhkaha alaabada hardware ka soo baxa xadhigga birta ah ee aan birta lahayn, qeexid yar oo xadhig silig bir ah, xadhig caag ah, xadhig silig khafiif ah, xadhig caag ah, xadhig guga, xadhig iftiiminta iyo xadhig silig, iwm. Xarig Multi-strand (1×7, 7×7, 7×19, 6*19) noocyo dhamaystiran oo xadhig silig birta ahama iyo xadhig silig. Qeexitaannada xadhigga siliga birta ah ee birta ah: ø0.3 — ø10.0 Tilmaamaha gaarka ah ee xadhigga xabagta r...
Xogta Guud Dhexroorka Xadhkaha Siligga Dhexroorka xadhigga siligga waa dhexroorka goobada kaas oo ku lifaaqan dhammaan xirmooyinka. Marka la cabbirayo xadhigga siliga waxaa muhiim ah in la qaado masaafada ugu weyn ee xadka bannaanka ee Crown;s ee laba xadhig oo iska soo horjeeda. Cabbirka dooxooyinka ayaa keeni doona akhrin hoose oo khaldan . Habka Cabbiraadda Dhexroorka Cailper, oo lagu rakibay daanno ballaadhan oo ku filan in lagu daboolo wax aan ka yarayn laba xadhig oo isku xiga Qaybta Badbaadada ee Xadhigga Siliga Way adag tahay in ...